Downloads 6 881
Munyori: Model kubudikidza AlphaSim, update naDavid Robles http://www.virtavia.com
Download KwaP3D v2 v3 v4 & FSX SP2 / Acc & FSX-Steam #Native FSX uye / kana P3D #3D Virtual Cockpit
Ichi FSX / P3D chete nokutendeuka uye haangazvidembi kushanda FS2004. Original Model chakasikwa AlphaSim Ltd nokuda FS2004. Updated kuti CONECT akatevedzana B-52H naDavid Robles.
ndege ino kwakaedzwa musi FSX Gold pamwe Yechipiri, Prepar3Dv2.5, uye Prepar3Dv3
The CONECT Platform ndiko saka itsva isina History chaiyo, akapinda basa mukupera 2014, mangwanani 2015 uye richiri kuitwa updated:
B-52s nguva nenguva vagadzirise pana USAF Nokuraramisa depots akadai Tinker Air Force Base, Oklahoma. The Buff vanotarisirwa kuti varambe vari mubasa kanenge kusvikira 2045, anenge 90 makore okutanga B-52 akapinda basa. The Akatombo anoramba kuvimba B-52 nokuti unoramba inobudirira uye mari rinorema bhomba, kunyanya rudzi mishoni kuti dzave inoitwa kubva pakupera kweHondo Yemashoko pamusoro marudzi dzinotambura mhepo kudzivirira nezvaanogona. The B-52 ane vachikwanisa usimbe kwenguva pamusoro (kana kunyange tsime kunze) muhondo, uye kurwira zvakarurama Standoff uye zvakananga moto munitions. Chave kukubatsira chinokosha pakutsigira pasi kuvhiyiwa panguva zvose ichangopfuura kurwisana. Boeing ari pari paakanunura Kits masere 2013. The ndege yokutanga pari kwawo upgrading muitiro, kuti kupedzwa muna April 2014. 10 mamwe Kits chichange delievered muna 2014 uye 2015.
Muna July 2013, the Air Force vakatanga rengarava-kwazvo rwokugadzira ndiwedzere yawo B-52 Ndege inonzi Combat Network Communications Technology (CONECT) kuti modernize zvemagetsi, Communications Technology, kadambari, zvishandiso, avionics pamusoro ndege nechepamusoro. CONECT upgrades zvinosanganisira Software uye Hardware zvakadai servers itsva, modems, maredhiyo, mashoko-zvinobatanidza, vagamuchiri, digitaalinen flightdeck uye workstations nokuda rakarira.
Akaumbwa ndiye ARC-210 Warrior mhiri-mutsetse-of-kuona Software programmable redhiyo kugona zvinoparadzira inzwi, data, uye mashoko ari pokubhururuka pakati B-52s uye pasi murayiro uye masimba nzvimbo, zvichibvumira kuti nokupfuuridzirwa uye kutambira mashoko chete akagadziridzwa akachenjera, nzvimbo ine, kana kukanganiswa ruzivo; yakapfuura mune pokubhururuka chipfuro kuchinja kunodiwa nokukopa pasi Coordonatele, ukuwo ARC-210 anobvumira muchina-kuti-machine Kutapurirana data, anobatsira pamusoro-refu kutsungirira mishoni apo nhovo huru angave akachinja nzvimbo apo B-52 akanga achifamba. The ndege achakwanisa kugamuchira mashoko kuburikidza Link-16. CONECT upgrades achaita mari $ 1.1 mabhiriyoni uchitikurudzira uye kutora makore akawanda. Mari yave yakasimbiswa kuti 30 B-52s uye Air Force anotarisira 10 CONECT upgrades pagore asi kwawedzera asi kutsunga. Zvombo upgrades zvinosanganisira 1760 Weapons Internal Bay ndiwedzere (IWBU), izvo anopa 66 muzana kuwedzera chingoro kugona kushandisa digital inowanikwa uye muhombe launcher kuwedzera zvombo payload. The IWBU nesimba vanotarisirwa mari nehasha $ 313 miriyoni. The 1760 IWBU achabvumira B-52 kuti vatakure AGM-158B JASSM-ER uye ADM-160C MALD. All 1760 IWBUs vanofanira kuva paIndaneti October 2017.
Vachiramba matatu B-52s akatakura 36 zvombo, Ndege mbiri vachava kugona kutakura 40 zvombo, achideredza uwandu zvokuchenesa uye uwandu huni inodiwa kuushumiri, uye anopa mukana wokusarudza kuisa mamwe zvombo ari kupfura pamwe chete nhamba ndege.  The 1760 IWBU achibvumira zvombo zvakarurama-kutungamirirwa kuti kutumirwa kubva mukati zvombo Bay, kuwedzera uwandu kutungamirirwa zvombo ane B-52 anogona kutakura uye kuderedza kudiwa kutungamirirwa mabhomba kutakurwa externally pamusoro bapiro hardpoints. Wokutanga danho kuchaita kubvumira B-52 kutakura 24 500-paundi JDAMs kana 20 2,000-paundi JDAMs, pamwe kwapera zvikamu dzichishandiswa kwakabva JASSM uye mhuri MALD pamusoro zvombo. Mukuwedzera kutakura zvakawanda akangwara mabhomba, zvichiita nechomukati kubva mapapiro kunoguma 15 muzana mafuta nemari uye mukuru siyana kubva zvishoma zvuva. The Akatombo anoramba kuvimba B-52 nokuti unoramba inobudirira uye mari rinorema bhomba, kunyanya rudzi mishoni kuti dzave inoitwa kubva pakupera kweHondo Yemashoko pamusoro marudzi dzinotambura mhepo kudzivirira nezvaanogona. The B-52 rave akaramba basa nokuti hapana yakavimbika kutsiviwa.
Zvayakaita, ivo airframes vachiri usingazununguki, asi maererano zvemagetsi nezvaanogona, iyo bhomba iri ibwe zera kakasaririra. Dzimwe kuvandudzika kuchasanganisira ezvinhu-of-the-nounyanzvi kadambari samambure pamwe workstations nechimwe vashandi chinzvimbo uye Integrated digitaalinen interphone pamwe yakawedzera vachikwanisa kuti achabvumira vashandi nhengo yokutaura mumwe musi headsets vakapakata ruzha-hwekubvisa rwokugadzira. The $ 76 miriyoni CONECT ndiwedzere achapiwa anoitwa Boeing uye Anofukidza pasi-pamwero kutanga kugadzirwa wokutanga CONECT Kits, pamwe handingadariki mativi uye ichitarisirwa uye basa panguva Tinker.
Ona zvinotevera Link:
New Mumagazini rongedza ichi:
1. FSX wechokwadi Native modeling, vatendeukira FSX vachishandisa MDLX chirongwa ARNO vake.
2. pendi All itsva.
3. New PaShona dhumhira nzvimbo ine
4. pendi zvose vari DDS format.
6. New mhepo configuration faira.
7. New HD VC textures
8. FSX Air File iiswe.
9. Camera inoona vakawedzera.
10. Transparency nyaya pamwe VC womuenzaniso kugadziriswa.
11. gomba All itsva digitaalinen jongwe akasikwa.
12. FSX coded gauges uye dzesub ukomba
13. Default uye tsika GPS
14. Kushanda Traffic Radar
Boeing B-52H CONECT Package FSX & P3D Download
Downloads: 72 335
Downloads: 122 769
Downloads: 37 549
Downloads: 9 808
Downloads: 63 354
Downloads: 38 551